Qaybta 1: Waa maxay qaabka 3GP?
Qeybta 2: Maxaad Windows Media Player ma ciyaari karo 3GP?
Qeybta 3: Sida loo ciyaaro 3GP la Windows Media Player?
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in dhammaan videos gacanta ah oo la daawaday nidaamka ama laptop waa in la hubiyo in windows media player waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira iyo user helo shaqada lagu sameeyey qaab iyo fasalka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijyada ugu fiican iyo pug-tago rakiban yihiin si loo hubiyo in user la cafiyo arrintan la xiriira iyo dhibaatada in la hoos loo xalin lahaa sameeyo. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan hab nidaamsan oo ku wajahan xalka by rakibo barnaamijyo in u fiican oo taas user ay u baahan tahay si ay u dhamaystiraan shaqada si fudud.
La Xiriira Qalabka telefoonada gacanta iyo Xararad qaab tani ay tahay sida ugu fiican si loo hubiyo in user helo shaqada sameeyo oo aan wax arrintan iyo arrin guud oo ka mid ah ciyaaraha qalab video mobile loo xalin lahaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la ma aha oo kaliya lagu rakibay gal qalabka qaab ciyaaryahanka laakiin waxa uu sidoo kale loo qaybiyay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo sameeyo.
Ayaa qaab 3G2 sidoo kale waa qaab kale walaashiis 3GP sida ay sidoo kale la xiriira telefoonada gacanta iyo labada qaabab isticmaali weel la mid ah si loo hubiyo in arrinta la xalin iyo wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira waa in qaab la xiriira audio iyo video labadaba oo ay ahayd lagama maarmaan in la caddeeyo arrintan sida inta badan isticmaala ee arrintan la xiriira qabaa in qaab la xiriira ciyaaraha ah video aydan xaraysan oo kaliya. Waxaa xaaladduna sidaa maaha, iyo sabab la mid ah waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee geedi socodka tahay waxaa laga codsadaa marka windows media player ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in tutorial la akhristay oo waan fahmay in buuxa si ay arrinta ku saabsan xallinta arrinta sakhiray waxaa waligeed ka horimaanin iyo user helo natiijada ugu wanaagsan iyo dhibaatada la xalin sida ugu dhaqsaha badan sidii loo ogaan karo si loo hubiyo in waxa la qodbay mar oo dhan.
Sida qaabab kale waxaa jira tobanaan kun oo sababo arrimo farsamo farsamo iyo kuwa aan hardware iyo software la xiriira, labadaba si loo hubiyo in arrinta lagu xaliyo. Si kastaba ha ahaatee in la sameeyo wax saxda ah iyo in ay dhibic u tahay in la xuso in tutorial la faray dhinaca arrimaha la xidhiidha barnaamijyada software-ka oo sidaas daraaddeed mid ah oo gobolka ka mid ah xallinta tahay ayaa la bixin doonaa si loo hubiyo in isticmaalka helo Natiijada ugu fiican iyo wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Arrinta ugu badan ee arrintan la xiriira waa xaqiiqada ah in 3GP socon fur-in aan la rakibay nidaamka ay sabab u tahay taas oo user waa sii baadi iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in loo fiirsado in user wuxuu hubinayaa in in arrinta la xalin soo degsado fur-in si kastaba ha ahaatee waxa ay sidoo kale in la xusay in ee tutorial la Akhriyo ilaa dhamaadka aan loo baahnayn si loo soo dajiyo kasta oo ka siib-in oo user natiijada oo aan wax arrintan oo dhibaato ka heli kartaa waa.
Siyaabaha iyo hababka in lagu xusay in tutorial this sidoo kale hubin doona in user helo arrimaha xalin style iyo fasalka oo aan kaalmo ka mid ah barnaamijyada wax adag oo aan kaliya ku baabbi'iyee xasuusta nidaamka laakiin sidoo kale in la hubiyo in user had iyo jeer waa hayo arrimaha waafaqsan iyo dhibaatada la xidhiidha in marna lagu taliyey, sidaas darteed user waa in sidoo kale la hubiyo in tutorial la akhriyey buuxa si ay u hubiyaan in dhibaatada la waligeed ka horimaanin mustaqbalka iyo user helo ka mid ah arrinta wax waqti ah gudahood at dhan.
Wixii qaybtan aynu u hesho si toos ah u barta oo taas daraaddeed waxaa la taliyay in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka. Wondershare Video Converter Ultimate waa ugu fiican iyo barnaamijka software aan aadka u isticmaalno in arrintan la xiriira, taas oo sidoo kale hubiyaa in user helo shaqo sameeyey oo aan caawimaad kasta ka siib-in oo sidaas daraaddeed waa inuusan marna lagu talinayaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in la 150+ taageero qaab barnaamijkan ayaa la dhisay si ay u hubiyaan in uu leeyahay user marnaba in ay sugaan muddo dheer si loo hubiyo in arrinta la xaliyey. In si kale loo dhigo diinta qaabka waa mid dhaqsiyaha badan iyo user Sidoo kale waa in aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah barnaamijka by in la hubiyo in talaabooyinka iyo habka uu soo sharaxay hoos waxaa la socda sida amar ah in lagu tilmaamay in la hubiyo in ay user helo natiijada ugu fiican ee aan wax arrintan iyo dhibaato.
1. Download iyo rakibi barnaamijka halkan oo marka la sameeyo user u baahan yahay si uu u bilaabi si aad u hesho interface soo socda:
2. faylasha loo baahan yahay in la badaley markaas waa in la soo jiiday, si aad u hesho socda in si fudud oo ku qanacsan tahay:
3. qaab saarka ayaa markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo aan wax arrin oo qaab ah in waxa taageeray windows media player la doortay iyo sidoo:
4. button ayaa dhinaca hoose ee bidixda sida diinta waa in la sii adkeeyey inuu ku soo bilowdo diinta taas oo soo afjari lahaa nidaamka:
5. Marka badaley ku jira faylka loo arki karaa iyadoo aysan arrinta iyo dhibaato,
> Resource > WMP > xalin-Aayad files play 3GP in Windows Media Player 12/11 / 10etc